Xiddig Muhiim U Ah Real Madrid Oo Ku Dhacay Baadhitaanka » Axadle Wararka Maanta
Xiddig Muhiim U Ah Real Madrid Oo Ku Dhacay Baadhitaanka
By Abdiwahab Ahmed	 On Nov 2, 2020
Zinedine Zidane ayuu walaac weyni soo food saaray ka hor kulanka ay kooxdiisa Real Madrid ku qaabbili doonto Inter Milan Salaasada habeen dambe, waxaana baadhitaanka xanuunka Covid-19 ku dhacay hal ciyaartoy oo laga helay xanuunkan.
Sida uu dhigayo sharciga UEFA ay u dejisay ilaalinta badqabka ciyaartoyda, laacib kasta waxa laga qaadayaa laba baadhitaan ka hor ciyaarta, waxaana natiijada ugu dambaysa ay tahay in la gudbiyo lix saacadood ka hor ciyaarta, iyadoo ciyaartoyga labada baadhitaanka ka gudba oo kaliya loo ogolaanayo inuu ka qayb galo kulamada Champions League iyo Europa League.
Lama sheegin magaca xiddiga muhiimka ah ee Real Madrid ee baadhitaankan ku dhacay, balse UEFA ayaa hore ugu qoondaysay in baadhitaan lagu sameeyo dhamaan ciyaartoyda maalin amaba laba maalmood ka hor kulamada Champions League, waxaana natiijadii u dambaysay ee Real Madrid ay muujinaysaa inuu hal ciyaartoy xanuunkani hayo.
Sida uu qoray wargeyska Marca, dhamaan ciyaartoyda kale ee Real Madrid ayaa badqab ka ah xanuunkan, waxaase jira hal laacib oo kaliya.
Xalay fiidkii ayaa la shaaciyey in natiijada baadhitaankani soo baxday, balse Real Madrid ayaa Isniinta maanta mar kale samayn doonta baadhitaan, taas oo la filayo inay si buuxda u xaqiijiso sida xaalku yahay.
Real Madrid ayaan wax war-saxaafadeed ah kasoo saarin arrintan, waxay se rajaynaysaa inay been noqoto sidii dhacday bilowgii xili ciyaareedkan oo Martin Odegaard lagu sheegay xanuunka ka hor intii aan beri laga dhigin.
Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli Real Madrid ay dhaawac kaga maqan yihiin Dani Carvajal, Nacho iyo Martin Odegaard, halka ay tababarka kusoo laabteen Alvaro Odriozola iyo Lucas Vazquesz.
Kooxda reer Spain ayaa haysata hal dhibic oo kaliya isla markaana dheeshay laba ciyaarood oo tartanka Champions League ah, halka Inter Milan ay laba dhibcood soo xoogsatay.